आजको बिदेसी विनिमय डर यस्तो छ। तालिका सहित हेर्नुहोस - Gulf Sandesh
आजको बिदेसी विनिमय डर यस्तो छ। तालिका सहित हेर्नुहोस
काठमाडौँ ,आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ३५ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय १० रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४४ रुपैयाँ ३६ पैसा, १ सय ४५ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ।
साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २८ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ भने मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा छ भने बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६३ रुपैयाँ ५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ६५ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९२ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर २ सय ९४ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ।त
← केन्या देसको रंगीला बारबाट शनिबार १२ नेपाली महिलालाई पक्राउ।
नेपालीहरुले म्यान्मारको पानी पर्व (थिङयान) भब्यताको साथ मनाए। →
अमेरिकी डलरसहित सबै देशको भाउ ओरालो लाग्यो अन्य देशको अवस्था यस्तो छ ? (सूचीसहित) ।
अमेरिकी डलरसहित सबै देशको मूल्य उकालो लाग्यो,हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
August 30, 2019 GulfSandesh 0
June 16, 2019 GulfSandesh 0